Oké Osimiri Okhotsk: njirimara, ọzụzụ na akụnụba | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka oke osimiri nke sara mmiri n'akụkụ steeti Russia na Japan. Ọ gbasara Oke Osimiri Okhotsk. Ọ dị na northwest Pacific Ocean na ụsọ oké osimiri Northeast Asia. O bu oke osimiri etinyere n’uzo ichoro ma taa di nkpa.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, nhazi na mkpa nke Oké Osimiri Okhotsk.
2 Ihu igwe nke Oké Osimiri Okhotsk
3 Akụ na ụba nke Oké Osimiri Okhotsk
Ọ bụ oke osimiri nke juputara n'ụsọ osimiri nke steeti Russia na Japan. Mpaghara ya dum bu 1.6 square kilomita ma o di na northwest nke Pacific Ocean. O nwere oke akuku akuku ugwu nke akuku Siberia, rue odida anyanwu site na agwaetiti Sakhalin, site na owuwa anyanwu Kaminska Peninsula na Agwaetiti Kuril. Ugwu dị n'ụsọ ugwu nke agwaetiti Japan bụ Hokkaido bụ ebe ndịda nke oke osimiri a.
Nmepụta ahụ amachaala kemgbe amalitere ya na nde abụọ gara aga n'ihi afọ ice ndị sochiri. Ihe oyi na thaing na-aga n'ihu na-eweta mmiri zuru ezu na osimiri nke kọntinent iji mechaa saa mmiri ndị a. Oké osimiri ahụ dị ala n'ebe ugwu na ọdịda anyanwụ mana ọ na-enwetụ omimi ka anyị na-aga n'ebe ndịda. N'ebe na-emighị emi anyị na-ahụ na nkezi nke naanị 200 mita. Ka anyị na-aga n'akụkụ ndịda, anyị na-ahụ ebe kachasị mie emi nke dị na Kuril Trench. Akụkụ miri emi nke ukwuu bụ ihe dịka mita 2.500.
Oke Osimiri Okhotsk Ọ dịpụrụ adịpụ maka ịnwe ụsọ mmiri kọntinent nwere njirimara na oke nkume. Ha na-adịkarị ka nkume dị elu nke nwere ọtụtụ okwute na ịdị elu. Nnukwu osimiri na-azụ ya na-asọga n’akụkụ mmiri ndị a, nke bụ Amur, Tugur, Uda, Okhota, Gizhiga na Penzhina. Anyị ga-ekwu maka nke mbụ ma emesịa ebe ọ bụ ụtụ isi na onye na-ahụ maka itinyekwu mmiri n'oké osimiri.
N'aka nke ọzọ, n'ụsọ osimiri nke agwaetiti Hokkaido na Sakhalin njirimara ndị ahụ dị ntakịrị. Ugwu di elu pere mpe ma pere mpe. Nke a na-ekpebi na nnu dị na mmiri dị ntakịrị na mmiri mmiri dị n'akụkụ ugwu na ugwu ọdịda anyanwụ. Mmeghari nke iyi nke Oké Osimiri Okhotsk na-aga n'ihu oge. Nke a na-emekarịrị ebe ọ bụ na ọ dị na ugwu ugwu. Mmiri ahụ na-ekpo ọkụ na-esi na Oké Osimiri Japan n'akụkụ ugwu nke na-agafe na Strait of Tartary. Ọwara a bụ maka ikewapụ Sakhalin na kọntinent ahụ.
Mmiri ndị a na-agafere Strait nke Perouse dị n’etiti Sakhalin na Hokkaido. Akụkụ ọzọ nke na-abanye n'Oké Osimiri Okhotsk bụ mmiri mmiri dị jụụ nke sitere na Pacific site na ọwa mmiri nke Kuriles.
Ihu igwe nke Oké Osimiri Okhotsk
Ka anyị lee ọnọdụ ihu igwe nke oke osimiri a. Oyi kacha oyi na East Asia niile. N'oge oge oyi, ihu igwe na ọchịchị okpomoku dị ka nke Arctic. Nke ahụ bụ, ọ dịka ọ bụ oke osimiri dị n'akụkụ ugwu. Igwe okpomọkụ dị ala n'afọ niile. Mpaghara ndị dị Northeast, North, na West na-enwe ihu igwe dị egwu n'oge oyi. Nke a bụ n'ihi mmetụta mpaghara Eshia nwere na ihu igwe. Ugbua n'ime ọnwa nke Ọktọba rue Eprel anyị na-ahụ ọnọdụ ihu igwe dị oke ala yana ọkara dị n'okpuru ogo 0. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a na-aga n’ihu ma na-anagide oge na-eme ka oké osimiri kpọnwụọ.
Na mpaghara ndịda na ndịda ọwụwa anyanwụ ọ nwere ihu igwe mmiri dị ala karịa ka ọ dị nso na Oke Osimiri Pasifik. Nkezi mmiri ozuzo kwa afọ bụ 400 mm n'ebe ugwu, 700 mm na ọdịda anyanwụ na ihe dịka 1.000 mm na ndịda na ndịda ọwụwa anyanwụ. N’agbanyeghị na akụkụ ugwu anaghị enwe oke mmiri ozuzo, okpomoku ya pere ezigbo mpe ma na-ajụkwa mmiri n’oké osimiri.
Akụ na ụba nke Oké Osimiri Okhotsk
Dịka anyị kwuburu na mbido isiokwu a, oke osimiri a abughi naanị ihe dị mkpa site na usoro ndu mana yana site na akụ na ụba. Ka anyị buru ụzọ leba anya na ụdị mmiri dị iche iche nke oke osimiri a nwere. Ọ bụ otu n’ime osimiri kacha arụpụta ihe n’ụwa. Ma ọ bụ na ọ nwere mmiri drainage nke na-enyere aka igbapu nnukwu oke mmiri nke jupụtara na nri na-akwado mmụba nke ndụ. Na mgbakwunye, ọ na-enwe mgbanwe mgbanwe oke mmiri nke mmiri na ebugharị nke mmiri dị omimi nke jupụtara na nri na ihe ndị dị mma maka mmepe nke ihe dị iche iche dị ndụ.
Ndia na-anọchi anya osisi ọkachasị ọtụtụ ụdị algae. Algae ndị a nwere ezigbo azụmaahịa maka ọtụtụ ngwaahịa. Na mmiri ya, mọsel, crabs, urchins, na ndị ọzọ, pụtara ìhè. Banyere ụdị azụ dị oke mkpa nke azụmahịa, anyị nwere azụ asa, pollock, cod, salmon, wdg. Agbanyeghi na oke, Oke Okhotsk bukwara ndi nwere anumanu mmiri, tinyere whale, ọdụm mmiri na akàrà.
Nkụ azụ dị mkpa maka akụ na ụba Russia. Shippingbupu ụgbọ mmiri na-ejikọ ọdụ ụgbọ mmiri ọwụwa anyanwụ nke Russia gafere Oké Osimiri Okhotsk. Akpụrụ mmiri oyi nke na-ekpuchi oke osimiri a bụ oyi bụ ihe mgbochi okporo ụzọ ụgbọ mmiri, ma na ọkọchị ọ bụ igwe ojii. Ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu mmasị azụmahịa, ọ dị ize ndụ ịnyagharịa ebe ndị a. Ihe ize ndụ ọzọ anyị nwere ike ịnwe mgbe anyị na-agagharị n’oké osimiri a bụ mmiri iyi siri ike na okwute ndị mikpuru emikpu. Ha nwere ike iduga nkwụsịtụ ụgbọ mmiri na ihe mberede ndị ị na-achọghị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri Okhotsk na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Okhotsk